Pokhara Archives - नेपाल आज
पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ – अर्थमन्त्री महरा
पुस – २९ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। पोखरा उपमहानगरपालिका २१ आैँ नगर परिषद्को शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भने – देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलको रुपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै […]
पोखरामा साहसिक पर्यटन क्यानोनिङको सम्भावना खोजिँदै
पुस – २१ । साहसिक पर्यटनका रुपमा चासो र चर्चाको वषय बन्दै गएको खेल क्यानोनिङ (छाँगावरोहण)को पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा थप सम्भावना खोज्न थालिएको छ । पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा जलयात्रा, पदयात्रा, पर्वतारोहरण आदिको उद्देश्यका साथ आउने गरेका स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकलाई छाँगावरोहणबाट समेत मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यका साथ नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनले यसका सम्भावनालाई खोज्न थालेको […]
नयाँ प्रतिभाको खोजीका लागि अभियान
मंसिर – ११ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कास्कीले जिल्लाभित्र लोक गीत तथा सङ्गीतका क्षेत्रमा लुकेका प्रतिभालाई उजागर गर्ने सोचका साथ प्रतिभा खोजी अभियान सुरु गरेको छ । प्रतिभा भएर पनि बाहिर आउन नसकेका व्यक्तित्वको राष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउने सोचका साथ अभियान सुरु गरिएको हो । प्रतिष्ठानका कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीका अनुसार अभियानअन्तर्गत […]
अल्ट्रालाइट दुर्घटनामा पाइलटकाे मृत्यु, एक विदेशी घाइते
Posted on: November 23, 2016Posted by: netra
मंसिर – ८ । ह्याङग्लाइडर उडाउने क्रममा एभिया क्लबले पोखरामा सञ्चालन गर्दै आएको अल्ट्रालाइट जहाज बुधबार दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा परी एभिया क्लबमा कार्यरत रसियन पाइलट अलेक्जेन्डर म्याक्सिमोभको मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी निरीक्षक मोहनमणि अधिकारीले जानकारी दिए । बुधबार बिहान कास्कीकोटको लौरुकस्थित आफ्नै हवाइ मैदानमा भएको दुर्घटनामा क्यानेडियाली महिला जिलेनी भोल्कर […]
Posted on: November 14, 2016Posted by: netra
कात्तिक – २९ । नेपाल तरुण दलको पोखरामा जारी चौँथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन बिहान १०.०० बजेपछि बन्दसत्र सुरु हुने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । हिजोदेखि सुरु बन्दसत्रमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेकामा प्रतिवेदनमाथि बोल्न चाहने महाधिवेशन प्रतिनिधि बाँकी नै रहे पनि बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको प्रतिनिधिको गुनासो छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि […]
तरुण दलकाे बन्दसत्र सुरु
Posted on: November 13, 2016November 18, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक २८ । नेपाल तरुण दलको शनिबारदेखि यहाँ सुरु चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत अाइतबार पोखरा सभागृहमा बन्दसत्र सुरु भएको छ । बन्दसत्रको तरुण दलका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सांसद उदयशम्शेर राणाले नेपालमा युवासँग सम्बन्धित सबै समस्याको समाधान गर्न आवाज उठाउने तरुण दल वर्तमानको […]
पोखरालाई प्लास्टिकका झोला र गिलास निषेध क्षेत्र घाेषित
कात्तिक – २४ । पोखरा उपमहानगरपालिकाका २९ वटै वडालाई आजदेखि प्लास्टिकका झोला र गिलास निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पोखरा उपमहानगरपालिकालाई प्लास्टिक झोला र गिलास निषेधको आज घोषणा गर्दै घरदेखि सहर सफाइ गर्ने अभियानमा जुट्न सबै नगरवासीसँग आग्रह गरे। प्लास्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर […]
प्याराग्लाइडिङका सबै उडान बन्द
Posted on: November 8, 2016November 8, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक – २३ । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था पोखराले मंगलबार प्याराग्लाइडिङका सबै उडान सेवा बन्द गरेको छ । गत शुक्रबार स्याङ्जाको स्वरेकमा प्याराग्लाइडिङ उडान प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परी शैलेश पहारीको मृत्यु भएको शोकमा प्याराग्लाइडिङका सबै उडान मंगलबारका लागि बन्द गरिएको संस्थाका अध्यक्ष सोभित बानियाँले बताए । पोखराको लेकसाइड निवासी पहारीको मंगलबार पोखराको रामघाटस्थित सेती नदीको […]
दूध बेचेर मासिक एक लाख आम्दानी गर्दै खैरेनीका नीलकण्ठ
Posted on: November 7, 2016Posted by: netra
कात्तिक २२ । मेहनत गरे स्वदेशमै पनि कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका–१७ खैरेनीका नीलकण्ठ पौडेलले सुरु गरेकाे गाईपालन व्यवसाय नै एक उदाहरण बनेको छ । उनले दूध बेचेर मासिक एक लाख आम्दानी गर्दै अाएका छन् । ‘खैरेनी कृषि फार्म’ दर्ता गरी विगत सात वर्षदेखि यस व्यवसायमा लाग्नुभएका पौडेलले दैनिक ११० लिटर दूध बिक्री गर्दै […]
किन पर्याे भिआईपीका मनमा पोखरा, इतिहाससहित
Posted on: November 6, 2016November 6, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक २१ । अघिल्लो वर्ष सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक (मिनी सार्क सम्मेलन)मा सहभागी सार्क राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना र त्यसलगत्तै बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई आकर्षित गरेको पोखराको सुन्दरताले पछिल्लो पटक भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको मनलाई पनि लोभ्याएको छ । विश्वका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येमा एक महत्वपूर्ण गन्तव्यको रुपमा रहेकोे पोखरामा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमध्ये यही शुक्रबार भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट […]
तीन महिनामा रू १ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलन
Posted on: November 5, 2016November 5, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक – २० । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तीन महिनामा रू १ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले यस आवको साउन, भदौ र असोज महिनामा रू। १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राजस्व सङ्लन […]
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई पोखरामा कालोझण्डा देखाइयाे
Posted on: November 4, 2016November 4, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक १९ । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पोखरा आउनुअघि बेलुनमा झुण्ड्याएर कालोझण्डा उडाइएको छ । मुखर्जी जनकपुरबाट पोखरा उड्न लागेको खबर पाएलगत्तै अपरिचित समूहले पोखरामा बेलुनमा कालो झण्डा राखेर उडाएका हुन् । करीब साढे १ बजेको समयमा दोबिल्ला क्षेत्रबाट बेलुनमा कालो झण्डा राखेर उडाएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार १०र१२ वटा बेलुनमा कालो झण्डा […]
भारतीय राष्ट्रपति जनकपुर, पोखरा र लुम्बिनी जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रम
Posted on: November 4, 2016November 4, 2016Posted by: netra
समाचार / काठमाडौँ कात्तिक – १८ । तीन दिने नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तेस्रो दिनको भ्रमण जनकपुर, पोखरा र लम्बिनी रहेको छ । काठमाडौँको दुई दिने भ्रमणपछि उनीलाई सरकारले बुद्ध एअरको विमान चार्टर गरे जनकपुर, पोखरा र लुम्बिनी घुमाउन लान लागेको हो । ट्राफिक जाम (बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म) […]
सांसद अधिकारी भन्छन, तोडफोड भएको थाहा छैन, सीडीयो भन्छन, रक्सी खाएर कसैले तोडफोड गरेको होला
Posted on: November 3, 2016November 4, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक – १८ । पोखरामा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुर्खजीको स्वागतको लागि तयार गरेको स्वागतद्वार तोडफोड भएको छ । नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद रविन्द्र अधिकारीले स्वागतद्वार तोडफोड भएको थाहा नभएको बताएका छन् । उनी काठमाडौंमा रहेकाले पोखरामा के भइरहेको छ थाहा नभएको नेपालआजलाई टेलिफोनमा बताएका छन् । अधिकारी पोखराबाट निर्वाचित भएका सासंद हुन् । कास्की […]
दुईसय वर्षपछि गुठी जग्गा मन्दिरको हक भोगमा
Posted on: October 29, 2016Posted by: netra
कात्तिक १३ । भौतिक सम्पन्न भएर पनि आर्थिक रुपमा विपन्न अवस्थामा रहेको पोखराको प्राचीन कालीन एक मन्दिरले दुईसय सात वर्षपछि गुठी जग्गा हकभोग गर्न थालेको छ । पोखरा उपमहानगरपालिका– १७ महतगौडास्थित सीतापाइलामा रहेको ऐतिहासिक सदाशिवजी शिद्धेश्वर हरिहर महादेव मन्दिरको नाउँमा बिरौटा फाँटमा रहेको करोडाैँ मूल्य बराबरको २९ रोपनी १२ आना गुठी जग्गा मन्दिरको हकभोगमा आएको […]
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले पाेखरामा २ घण्टा बिताउने
Posted on: October 25, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक ९ गते। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा पोखराको पनि भ्रमण गर्ने हुँदा त्यसको तयारी बैठक मंगलबार बसेकाे छ । भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको यही कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले कात्तिक १९ गते पोखराको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम […]
नेपाली विद्यार्थीद्वारा सोलार कार निर्माण
Posted on: September 30, 2016Posted by: nishesh
असोज १४ । पोखरामा नेपाली विद्यार्थीहरुको टोलीले पहिलो पटक चार सिट भएको सोलार कारको निर्माण गरेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लामाचौर पोखरामा मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका आठ जना विद्यार्थीहरु मिलेर नेपालमा पहिलो पटक चार सिट क्षमता भएको सोलारकार निर्माण गरेका हुन् । उक्त सोलार कार निर्माण टोलीमा सुमित ढकाल, कृष्ण तिमल्सिना,प्रयास रिमाल, दिपेश कार्की, सौगात […]
घण्टौं लाइन बसेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाएपछि पोखरेली निराश हुँदै घरतिर
Posted on: September 29, 2016September 29, 2016Posted by: nishesh
असोज – १३ । घण्टौं लाइनमा बसेर पनि पोखरेलीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पाएनन् । स्वागतका लागि फूलको गुच्छा र माला लिएर बसेका उनीहरु प्रत्यक्ष देख्न नपाउँदा निराश हुँदै घर फर्किएका हुन् । फेवातालको जलकुम्भी झार हटाउने अभियानमा सहभागी हुन आएकी राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागतमा बिहान ८ बजे देखि लाइनमा बसेकाहरुले राष्ट्रपतिलाई फूल त दिन पाएनन् […]
राष्ट्रपति द्वारा फेवाताल सरसफाइको शुभारम्भ
Posted on: September 29, 2016Posted by: nishesh
असाेज – १३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार फेवाताल सरसफाइ अभियानको शुभारम्भ गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा हल्लनचोकमा आयोजित कार्यक्रममा फेवातालबाट जलकुम्भी झार निकालेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भीमबहादुर कुँवरले पोखरा र फेवातालको सरसफाइमा सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सक्रिय सहभागिता रहँदै […]
पोखरामा एनसेल मेला सम्पन्न
Posted on: September 18, 2016Posted by: nishesh
असोज – २ । एनसेल कम्पनीले चाडपर्वकोे शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम एनसेल मेलाबाट गरेको छ । पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र, नयाँबजारमा आयोजना गरिएको एनसेल मेलामा सर्वसाधारणका साथै पर्यटकहरुका लागि विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरिएको हो । मेलाको मुख्यआकर्षणमा चर्चित कलाकारहरु तथा सांगीतिक समुहको प्रस्तुतीहरु, कमेडी, जादु, गेम स्टल, किडस् जोन र फुड स्टल थिए । एकदिने एनसेल मेला […]
‘डान्सबारमा आएर मनोरन्जन गर्नेलाई रातभरी शान्ती सुरक्षा दिन सक्दैनाै’ – आईजीपी अर्याल
भदौ २५ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले डान्स बारमा रातभरी मनोरञ्जन गर्नेहरुलाई प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्ने बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको आईजीपी अर्याल र नागरीकवीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले यस्तो बताएका हुन् । ‘डान्सबारमा आएर मनोरन्जन गर्नेहरुलाई प्रहरीले रातभरी शान्ती सुरक्षा दिन सक्दैन’, उनले भने, ‘कसैको रेष्टुरेण्ट र बार […]
पोखरामा प्रथम नकआउट टि–२० प्रतियोगिता सुरु
Posted on: September 6, 2016Posted by: Tirtha Khanal
भदौ – २१ । क्रिकेटको विकास गर्ने उद्धेश्यले प्रथम आमन्त्रित अमरसिंह नकआउट टि–२० प्रतियोगिता पोखरामा सुरु भएको छ । मोफसलमो फ्यूचर स्टार युवा क्लव अमरसिंहचोकले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा ५ जिल्लाका १५ टिमले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् भने भारतको एउटा टिमको सहभागिता रहनेछ । प्रतियोगितामा कास्कीका १० टिम तथा लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, वागलुङ, नेपालगञ्ज र भारतका एक–एक टोलीले […]
ढिकी र जाँतो संरक्षणमा जुट्दै पाेखराका आमाहरु
Posted on: August 25, 2016Posted by: nishesh
भदाै – ९ । आधुनिकतासँगै लोप हुन लागेको प्राचीन कुटानी तथा पिसानीको महत्वपूर्ण साधनका रुपमा परिचित ढिकी र जाँतो संरक्षणमा आमाहरु जुटेका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ स्थित शुभकामना आमा समूहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको प्रमुख प्रवेशद्वार रातोपैह्रास्थित सार्वजनिक जग्गामा ट्रष्ट भवन निर्माण गरेर लोपोन्मुख ढिकी र जाँतो स्थापना गरेको हो । ढिकीमा रातभरि […]
ढिकी – जाँतो संरक्षणमा जुटे आमाहरु
Posted on: August 25, 2016Posted by: Tirtha Khanal
बिमा गर्न फोटो पत्रकारको माग
भदाै – ३ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह कास्कीद्वारा १७७ औँ विश्व फोटोग्राफी दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित फोटो पत्रकारिताको महत्व र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा फोटो पत्रकारको बिमा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । फोटो खिच्ने क्यामेराको बिमा हुने तर क्यामेरा चलाउने पत्रकारको भने बिमा नहुनु दुःखद कुरा भएको औँल्याउँदै अन्तक्र्रियाका वक्ताहरूले पत्रकारितामा फोटोको महत्वसँगै चुनौती बढ्दै […]
एकै छिनको बोलीचाली र सुन्दर देख्दैमा विवाह गर्दा निम्त्यायाे मृत्यु
Posted on: August 18, 2016Posted by: nishesh
भदाैै – २ । एकछिनको बोलीचाली र सुन्दर देख्दैमा विवाह गरिहाल्ने प्रवृत्ति गलत हुँदोरहेछ भन्ने शुक्रबार अपराह्न पोखराको चालिसेचोकमा भएको वीभत्स हत्याले पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षअघि छिनभरको भेटघाटमै स्याङ्जाको किचनाश गाविस–३ का २२ वर्षीय सञ्जीवबहादुर नेपाली र स्याङ्जाकै पौवेगौडे गाविस–२ की सोनम रेग्मीबीच अन्तर्जातीय विवाह भएको थियो । तल्लो जातिसँग विवाह गरेको भन्दै […]
Posted on: August 18, 2016Posted by: netra
भदौ – २ । कास्कीको सिल्दुजुरे गाविस–९ बाहुनडाँडामा निर्माणाधीन अपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मादी खोलाबाट निकालिने २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी मङ्सिरदेखि नियमित रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको संयोजक राजकुमार बरालले जानकारी दिए । आयोजनाको चार हजार २०० मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । सुरुङभित्रको भागमा कङ्क्रिट लाइनिङ […]
दिपाङ ताललाई ‘हनिमुन लेक’का रुपमा विकास गरिने
Posted on: August 11, 2016Posted by: nishesh
साउन – २७ । सात तालको बगैंचा शहरका रुपमा परिचित लेखनाथ नगरपालिका वडा नं ६ स्थित दिपाङ ताललाई ‘हनिमुन लेक’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत यो ताल प्राकृतिक सौन्दर्य र दृश्यावलोकनका दृष्टिले उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ । घुमफिरका लागि नव विवाहित जोडीको छनोटमा पार्ने किसिमले अब यस तालको प्रवर्धन गर्न लागिएको […]
सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई रु २२ करोड ९३ लाख ६७ हजार भुक्तानी दिइने
Posted on: August 6, 2016August 6, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन – २२ । कर्मचारी सञ्चयकोष शाखा कार्यालय पोखराले आव ७२ / ७३ को असार मसान्तसम्म सेवा निवृत्त दुई हजार ३८६ जना कर्मचारीलाई रु २२ करोड ९३ लाख ६७ हजार कोष कट्टी रकम र मुनाफा भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले सोही अवधिमा घर सापटीमा रु २१ करोड १० लाख ४५ हजार र शैक्षिक सापटीमा रु […]
दिउँसै खुकुरी देखाएर लुटपाट
Posted on: July 31, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन–१६ । पोखराको व्यस्त बजारमा दिउँसो कालो र रातो पल्सर मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले पास्कल गल्लिमा खुकुरी देखाएर लुटपाट गरेका छन् । उनीहरूले पोखरा ७ घारीपाटनकी एक महिलाले लगाएको करिब ५ तोलाको सुनको सिक्रि लुटेर भागेका हुन् । उनी सँगै रहेकी अर्की महिलाको घाटीबाट सिक्रि निकाले पनि भाग्ने क्रममा सिक्रि भुइमा खसेको स्थानीयले बताए । […]
सरकार बनाउने र गिराउने खेल जनताको पक्षमा छैन् ‌‌‌- भट्टराई
Posted on: July 24, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
साउन ९। नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार बनाउने र गिराउने खेल देश र जनताको हितमा नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस सोसाइटी कास्कीकाे आयोजनामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जनअपेक्षानुरुप आर्थिक समृद्धि र विकासमा देशलाई लैजानुपर्नेमा पुराना राजनीतिक दल पुनः सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लागिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । गत […]
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित
Posted on: July 14, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – ३० । भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रभावित यहाँको पर्यटन व्यवसाय नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नतिका कारण हुने सवारी जाम र अवरोधका कारण थप प्रभावित भएको छ । भूकम्पबाट नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुर्याउन नसक्दा अहिले पनि विदेशी पर्यटक पूर्ववत् अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । नेपाल भित्रिएका पर्यटक नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अवरोधका कारण चितवन आउन कठिनाइ […]
Posted on: June 28, 2016June 28, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
असार १४ पर्यटकीय नगरी पोखराको साराङकोटमा केबलकार निर्माण हुने भएको छ । अन्नपुर्ण केबलकार प्रालिले पर्यटकीय गन्तब्य साराङकोटलाई लक्षित गरेर केबलकार निर्माण गर्न लागेको हो । केबलकारमा टाकासी मियाहराको लगानीमा केबलकार निर्माण हुन लागेको हो । पहिले मियाहरा जापानी नागरिक थिए तर धेरै बर्ष अगाडी जापानी नागरिकता त्यागेर उनी नेपाली नागरिक भएका थिए । मियाहरा […]
Posted on: June 26, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – १२ । सूचना प्रविधि विभागको सहयोग एवम् हाई वन होप सामुदायिक पुस्तकालय, भरतपोखरीको संयोजनमा लेखनाथ नगरपालिका– १८ बर पाण्डेथुममा हाई वन होप ई– भिलेज केन्द्र आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण वस्तीमा नविनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोग गराउँदै कृषि, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारलाई थप सहज एवम् सरल बनाउन […]
नेपालमा पर्यटकलाई खुसीको खबर विश्वको सबैभन्दा सस्तो शहर पोखरा
Posted on: June 11, 2016September 22, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध फोव्र्स पत्रिकाले पोखरालाई सबैभन्दा सस्तो पर्यटकीय गन्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ । फोव्र्सले अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रासँगको विनिमय दरलाई आधार मानेर यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । विश्वका धनी व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्ने फोव्र्सले प्रकाशित गर्ने यस्तो सूचीले नेपालको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बिस्वास लिइएको छ । उक्त पत्रिकाले […]